आगामी घटनाहरु - IntoKildare
Kildare मा के छ
चाहे कला, पाक कला, संगीत, खेल, वा परम्परा: यी शीर्ष कार्यक्रमहरू Kildare लाई यति खास बनाउँछन्।
यो हाम्रो विश्व प्रसिद्ध घोडा दौड घटनाहरु मध्ये एक मा भाग लिई बिना थोरब्रेड काउन्टी को लागी एक यात्रा हुनेछैन। धनी सांस्कृतिक विरासत को खोज कि Kildare कला प्रदर्शनीहरु, परिवार मैत्री उत्सवहरु र प्रत्यक्ष संगीत संग प्रस्ताव गरीएको छ। Kildare को मायालु सेन्ट, ब्रिगेड, एक सम्पूर्ण उत्सव उनको समर्पित छ जबकि प्रत्येक शहर र गाँउ सेन्ट प्याट्रिक दिवस, एक राष्ट्रिय छुट्टी को लागी एक विशेष उत्सव हुनेछ। र खाना प्रेमीहरु को लागी, Kildare महोत्सव को वार्षिक स्वाद मा Kildare का निर्माताहरु र शेफ को सबै भन्दा राम्रो अनुभव।
हामी तपाईंलाई सिर्जनात्मक नाडी पत्ता लगाउन आमन्त्रित गर्दछौं जसले किल्दारेलाई यत्तिको राम्रो ठाउँ बनाउँदछ। हाम्रो सिफारिस गरिएका घटनाहरू वा खोजी घटनाहरू निर्दिष्ट मिति, क्षेत्र वा तल रूचिहरू ब्राउज गरेर सुरु गर्नुहोस्।
तपाइँको आफ्नै घटनाको बारेमा हामीलाई भन्न चाहानुहुन्छ? यहाँ पेश गर्नुहोस्!
अब अब - 29 / 07 / 2022 29 / 07 / 2022
आज यो साताको अनत्यमा अर्को हप्ता अर्को महिना
समर स्टार्स किल्डरे लाइब्रेरीहरू
ग्रीष्मकालीन विज्ञान शिविर
बब डिलन रोड शो
देश ताराहरु संग एक रात
एक प्रवेश बनाउँदै: Musici आयरल्याण्ड
पप अप Gaeltacht
नि: शुल्क घटनाहरु
युरोपेली कविता महोत्सव २०२२ - रिभरब्यांक कला केन्द्र।
पठन र व्याख्यान
क्यासलटाउन हाउसमा वन बाथिंग वाक
कला र प्रदर्शनीहरु
फ्लोरेन्स र मिलीको साथ समर आर्ट क्याम्प
जिप्पी द फायर फाइटर
९-१२ वर्षका बालबालिकाका लागि मोबाइल संगीत विद्यालयसँग संगीत कार्यशाला सिक्नुहोस् र अन्वेषण गर्नुहोस्
33 दक्षिण मुख्य, स्वर्गबाट ​​कानाफूसी
सधैंभरि युवा महोत्सव
Juddmonte आयरिश ओक्स - Curragh रेसकोर्स
Kilboy Estates Stakes र Minstrel Stakes - Curragh रेसकोर्स
Ballymore Eustace Art Studio संग समर आर्ट क्याम्प
नास रेसकोर्समा जुलाई ग्रीष्मकालीन BBQ र संगीत साँझ
प्रवेश द्वार बनाउदै, 'एयर र गीतहरू': ब्रायन ह्युजेस, मार्गरेट होबान र एरिक डे बुटलेरसँग क्यासलटाउन हाउसमा
परम्परागत आयरिश संगीत कन्सर्ट नोएल हिल र फ्रान्की गेभिन
ग्लोरी डेज - ब्रुस स्प्रिंगस्टीन अपस्ट्यायर @ जज रोय बीन्सलाई श्रद्धांजलि
सरीसृप कार्यशाला - नास पुस्तकालय
थिएटर, फिल्म र नृत्य
ब्यारी म्याक गभर्नले शमूएल बेकेटलाई थिएटरमा प्रस्तुत गर्दछ
युद्ध र शान्ति - ओपन एयर थिएटर
भेला - एक योग रिट्रीट महोत्सव